Soo dejisan Stellar Phoenix Windows Data Recovery 7.0.0.3 ... – Vessoft
Soo dejisan Stellar Phoenix Windows Data Recovery
Bogga rasmiga ah: Stellar Phoenix Windows Data Recovery
Wikipedia: Stellar Phoenix Windows Data Recovery
Boosaska Phoenix Windows Data Recovery – Home – software ah inuu ka soo kabsado xogta lumay ama la tirtiro. Software wuxuu suuragelinayaa in la soo celiyo files, waraaqaha, emails, photos, database iwm boosaska Phoenix Windows Data Recovery – Home kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan baaritaan qoto dheer oo drive aad u adag oo soo bandhigay natiijada in seddex noocyo. Barnaamijka taageertaa dib u soo kabashada ee tirtiray emails, faylasha ama data in adeeg email. Boosaska Phoenix Windows Data Recovery – Home awood u inuu ka soo kabsado xog ku saabsan qalabka la qaadi karo, flash drives iyo warbaahinta kale waxay qaadi karo.
Kabanayso xogta lumo ama la tirtiray
Scan Deep ee drive aad u adag
Soo celinta xogta warbaahinta la qaadi karo
Faallo ku saabsan Stellar Phoenix Windows Data Recovery
Stellar Phoenix Windows Data Recovery Xirfadaha la xiriira
Qalabka inaad kala soo baxdo iyo files geliyaan ka FTP-server. Software wuxuu taageeraa noocyo kala duwan oo waxtar leh hawlaha iyo hab-iibsiga file ammaan ah in server.
Agabka in la xogta ka daruur kaydinta adeegga Google shaqeeyaan. software wuxuu hubinayaa xawaaraha sare iyo wax soo saarka shaqada la files.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in uu xogta ka helo ilaha maxaliga ah ama dibadda iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan oo dooro heerka naaquska ee nuqulka.
software waxaa loogu talagalay in ay gurmad iyo soo celinta nidaamka ku qasabno yar oo aan la isticmaalayo warbaahinta Downlaods.
software ah in gurmad iyo soo celinta xogta haddii ay dhacdo xaalad lama filaan ah. software waa ay awoodaan in ay gurmad nidaamka la goobaha hadda.
Software waafajinta xogta u dhexeeya qalabka HTC iyo computer ka. Waxa ay taageertaa update si toos ah darawallada qalabka.
Samsung Kies 3.2.16084.2 iyo 2.6.4.17113
Antiviruses, Sawireyaasha fayraska
Tijaabadani waxay taageertaa teknoolajiyada casriga ah ee ilaalinta shabakada waxayna ka saaraysaa software iyo qalab aan loo baahnayn.